ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ကွယ်လွန်
ဒေါက်တာအေးမောင်ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှုဖြင့် တရားစွဲမည်
လက်နက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အမှု စတင်စစ်ဆေးမည်
ဘဏ္ဍာနှစ်အပြောင်းအလဲ ၆လအတွက် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ဘီလီယံ ၁၃၀၀ကျော် တောင်းခံ
ငလျင် ၁၁ခုလှုပ်ခဲ့အပြီး ငလျင်ကြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေရှိကြောင်း မိုးဇလမှ အသိပေးထား
ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု တစ်ပါတီအဖြစ် ပူးပေါင်းရန် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
မွန်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် မွန်ပြည်သူ့ ညီလာခံ ကျင်းပ
Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection
You are at:Home»2014»November
Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ
အင်န်အယ်လ်ဒီ၏ ရည်မှန်းချက်သုံးခုအနက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားနည်းခဲ…
အင်န်အယ်လ်ဒီ၏ ရည်မှန်းချက်သုံးခုအနက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားနည်းခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို ====================================================== စိုးမြင့်နိုင် ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈- အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်မှန်းချက်သုံးခုအနက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားနည်းခဲ့…
Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ
ကာချုပ်က ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရေး လက်မခံဟုဆို =========== ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေ…
ကာချုပ်က ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရေး လက်မခံဟုဆို =========== ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်တွင် ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည် ပြုခဲ့သော ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို တပ်မတော်…
ကာချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးမူခြောက်ချက်ကို အသေဆုပ်ကိုင်မထားဟုပြော ============== တပ်…
ကာချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးမူခြောက်ချက်ကို အသေဆုပ်ကိုင်မထားဟုပြော ============== တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်ထားသော မူခြောက်ချက်ကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမျိုး မရှိကြောင်း ဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။…
တောင်ငူမှာ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့အရေးယူခံရ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိ…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://www.facebook.com/39218993127/photos/a.10150522560153128.405723.39218993127/10152954010673128/?type=1 https://www.facebook.com/
၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ ကိုလှမျိုးနောင်(ခ) မှန…
၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ ကိုလှမျိုးနောင်(ခ) မှန်ကြီးအတွက် ထုတ်ပြန်သောပြန်တမ်း via The 88 Generation Peace and Open Society’s Facebook Wall…
Political Prisoners Related
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-30 05:06:41
Min Thawe Thit
၁၈နှစ်﻿လီက﻿နေ၁၈သုံးလီ﻿တော့ဖြစ်﻿ပြီဗျို့။အခုပဲ﻿တောင်ငူမြို့နယ်﻿ရဲတပ်﻿ဖွဲ့ကဒီ﻿နေ့ကျွန်﻿﻿တော်﻿တို့﻿တောင်﻿ငူမှာအမျိုးသားပညာ﻿ရေးဥပ﻿ဒေကိုဆန့်﻿ကျင်﻿သပိတ်﻿﻿မှောက်﻿တဲ့သပိတ်﻿﻿မှောက်﻿﻿ကျောင်းသား﻿တွေကိုဦး﻿ဆောင်﻿တဲ့(၆)﻿ယောက်﻿ကိုလာဖမ်းပါတယ်﻿။ရဲမြို့နယ်﻿မှူးက﻿တော့ဒီ﻿ခေါင်း﻿ဆောင်﻿(၆)﻿ယောက်﻿ကိုအထက်﻿အမိန့်﻿အရယ﻿နေ့ညအဖမ်းပြရမှာမို့လို့အခုကျွန်﻿﻿တော်﻿တို့တည်းတဲ့ဘုန်းကြီး﻿ကျောင်းကိုလာဖမ်း﻿နေပါပြီ။ကျွန်﻿﻿တော်﻿တို့သ﻿ဘောက﻿တော့အစိုးရအ﻿နေနဲ့ဖမ်းရဲလို့ဖမ်းတာဖြစ်﻿တဲ့အတွက်﻿ကျွန်﻿﻿တော်﻿တို့တ﻿တွေကလဲအဖမ်းခံရဲပါတယ်﻿။သပိတ်﻿﻿မှောက်﻿﻿ကျောင်းသား﻿တွေကိုဦး﻿ဆောင်﻿တဲ့အတွက်﻿ပုဒ်﻿မ(၁၈)နဲ့လာဖမ်းတဲ့(၆)﻿ယောက်﻿က﻿တော့၁။ကိုမင်း﻿သွေးသစ်(ဗကသတွဲဖက်﻿အတွင်း﻿ရေးမှူး)﻿၂။ကိုမြတ်﻿သူ(﻿မြောင်းမြခရိုင်﻿ဗကသ)၃။ကို﻿အောင်﻿ထက်(﻿တောင်﻿ငူခရိုင်﻿ဗကသ)﻿၄။ကို﻿မင်းမင်း﻿ဇော်(မအူပင်﻿ခရိုင်﻿ဗကသ)﻿၅။ကို﻿အောင်﻿﻿နေပိုင်(မိတ္ထီလာခရိုင်﻿ဗကသ)﻿၆။ကို﻿အောင်﻿ကိုခန့်﻿(﻿တောင်﻿ငူခရိုင်﻿ဗကသ) မင်း﻿သွေးသစ်﻿ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်﻿
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မ…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152952533423128&id=39218993127 http://ift.tt/g8FRpY
LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ
ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေကြမ်းအားလွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးအတည်ပြုပြီးစီး ========================================== ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို အတည်ပြုနိုင်ရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေကြမ်းအား…
Luttaw - မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ
ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲ ပျက်သွားမည်ကို ပြည်သူများ မစိုးရိမ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု…
ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲ ပျက်သွားမည်ကို ပြည်သူများ မစိုးရိမ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော ====================================== ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈- ခြောက် ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမည့်အစီအစဉ် မဖြစ်ပေါ် ဘဲ ပျက်ယွင်းသွားမည်ကို…
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရမှု ဒီနေ့ ၂ နှစ်ပြည့်မှာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၃၀ ကျော်က ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ ကြပါတယ်။ via…
Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ
” တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသော ကချင်နှင့် ရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသများမှ ကျောင်းသားများအတ…
" တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသော ကချင်နှင့် ရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသများမှ ကျောင်းသားများအတွက် ပုဂ္ဂလိက ဆရာ ၂ဝ သွားမည် " တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကချင်ဒေသနှင့်…
http://aappb.org/bu/2014/11/ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုလှမျိုးနောင် ကွယ်လွန်ြ…
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုလှမျိုးနောင် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ၀မ်းနည်းကြောင်းသ၀ဏ်လွှာ
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » AAPP Condolence…
On November 27, 2014, the democracy movement in Burma lost one of its strongest proponents with the passing of Hla Myo Naung. A leading member of the 88 Generation Student Group, Hla Myo Naung has spent the last 26 years fighting for the rights and freedoms of all Burmese people, and has been persec…
Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ နေရာအတွက် မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော…
နိုင်ငံတော်သမ္မတ နေရာအတွက် မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD ပါတီ) က ၂၀၁၅…
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစု…
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော ========== ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းကို…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-28 07:37:48
AAPP Condolence Letter for Ko Hla Myo Naung
In Remembrance of Hla Myo Naung, 1969 – 2014On November 27, 2014, the democracy movement in Burma lost one of its strongest proponents with the passing of Hla Myo Naung. A leading member of the 88
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ကိုလှမျိုးနောင်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုလှမျိုးနောင် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ၀မ်းနည်းကြောင်းသ၀ဏ်လွှာ ၂၈၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားေ via Assistance Association for…
၆ ပွင့်ဆိုင်ထဲက တိုင်းရင်းသား ၁ ပွင့်ကို မေးမြန်းချက်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၆ ပွင့်ဆုိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်မယ့် တုိုင်းရင်းသားကုိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို[…] The post ၆ ပွင့်ဆိုင်ထဲက တိုင်းရင်းသား…
ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ တွေ့ဆုံမည် ရန်ကု...
“ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုက အမြင့်ဆုံး တစ်သက်တစ်ကျွန်း အထိ ချမှ...
တပ်မိသားစုဝင်တွေကို မဲဆွယ်ခွင့်ပေးဖို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်ပြ
ဒသမအကြိမ် ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း စာပေဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ
သူရိယနေဝန်း အပတ်စဉ်ဂျာနယ် ၆၆(ဃ)နဲ့ တရားစွဲခံရ
ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပြည်ထောင်စု တင်မည်
Burmese Military – တပ်မတော်ဆိုင်ရာ (180)
Cabinet – အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ (582)
Civil Wars – ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ (856)
Disaster – ဘေးအန္တရယ်များ (155)
Election – ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ (906)
Ethnics – တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ (355)
Intelligence – နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ (467)
Kachin States (100)
Land Rights – မြေယာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ (154)
Luttaw – မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ (389)
People Profiles (247)
Political Parties – နိုင်ငံရေးပါတီများ (537)
Projects – စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ (116)
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ငါတို့အားလုံး စစ်ကျွန်
ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – တော်တဲ့သူ
ကိုဂျေ – စာရေးဆရာမောင်သော်က ပြောသော ပုံပြင်များ
မောင်လူရေး – သီလရှင်တွေ တိပိဋက သုံးပုံဆောင် မပေါ်ခြင်းအကြောင်း